Intel Hunt Showdown Hack ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel Untchụ nta: Showdown mbanye anataghị ikike
Ike gwụrụ nke ikpebi n'etiti loot na imegwara? Nweta ihe kachasị mma nke ụwa abụọ na Intel Hunt: Showdown Hack!
Nweta ohere ichu nta anyị: Showdown Intel Hack maka ụbọchị 1 wee hụ ihe anyị nwere inye.
Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ị ga - achọ ogologo oge karịa mgbe ị na - aghọ aghụghọ, ị nwere ike zụta igodo ngwaahịa dị izu ụka 1!
Jiri anyị Hchụ nta: Showdown Intel Hack maka dị ka ogologo dị ka ị ga-amasị! Zụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa.
Untchụ nta: Ngosipụta ga-anwale gị (yana ndị enyi gị ma ọ bụrụ na ọdabara!) N'ọtụtụ ụzọ, ebe ọ bụghị naanị ndị mmegide ka ị ga-ele anya. Wepụ ma nnukwu anụ na egwuregwu ndị ọzọ na-enweghị nchegbu ọ bụla na-eji Hunt: Showdown hack!
Chụ nta: Showdown Intel Hack Information
Nweta ohere niile eji ewu ewu na Hunt: Showdown Hack ebe a na GamePron! Emepụtara iji mee ihe na igwe ndị dabeere na Intel, nke a bụ ngwá ọrụ na-akwado Windows 10 ma na-abịa naanị n'asụsụ Bekee. Ọ bụ ezie na ọ bụ HWID Locked, ọ na-abịa yana HWID Spoofer iji zere mmachi ndị gara aga! Ọ na - egosipụta Hunt a ma ama: Showdown Aimbot, yana ọtụtụ hacks na-ahụ anya n'ụdị Ihe na Enemy ESP. Na Ọkpụkpụ Prioritization, Ezigbo Aiming, na ihe Kemeghi FOV gburugburu, ị ga-enwe a ohere kpamkpam hazie gị hacking ahụmahụ mgbe na-arụ ọrụ na GamePron.
Hchụ nta anyị: Ngosipụta Intel Aimbot na-enye gị ohere ịhazigharị ngwa ọrụ n'ọtụtụ ụzọ, na-ahapụ gị ka ị hazie ụzọ aghụghọ gị. Enwere ike ikpocha njirimara ESP iji gosipụta ihe ụfọdụ / egwuregwu, na-enye ndị ọrụ GamePron ohere ịmụtakwu banyere ebumnuche ha n'ụzọ dị mfe.
Onye iro ESP (nke nwere ike ịhazi, Ọkpụkpụ)
Ozi Iro (Ọnwụ ọnwụ, Anya, Grunts, Ogbu ọchụ, Spiders, Mmiri ndị mmụọ, Meatheads, Immolators, Leeches, Hel hound, Ndị na-egbu anụ)
Ihe ESP (nke nwere ike ịhazi ya, ọnyà anụ ọhịa, ihe ngosi, igbe ọkọnọ (ammo, ahụike, ihe)), ngwa agha, ngwa agha tụbara (oriọna wdg), ihe ndị gbawara agbawa, ịchụ nta dinta, ịnyịnya na-anwụ anwụ, nnụnụ, nkịta na ngịga, ọkụkọ na coops , ngwa agha, ndị na-adọta mmanụ, mmanụ, ebe a na-ewepụta ihe.)
Aimbot nwere ike idozi ya nke ukwuu
Kemeghi FOV na Humanized ire ụtọ
Ebumnuche ọkpụkpụ ọkpụkpụ
Otutu nhazi nhazi
Hardware emulated mouse aimbot (nnọọ mma!)
Na-arụ ọrụ na ihe odide niile & NPCs!
Enweghị mgbasa (yana pasent slider)
Banyere ichu nta: Intel Showdown
GamePron ga-egboro ndị ọrụ anyị oge ọ bụla enwere ike, ebe nke ahụ bụ naanị ebumnuche ọ bụla onye nrụpụta mbanye anataghị ikike ga-enwe. Anyị emeela ka anyị jide n’aka na nke a dị mfe iji, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa icheta na a cheat bụ esịtidem. I nwedịrị ike ịgafe na-asọgharị mgbe ị na-eji aghụghọ a, ebe anyị na-enye nhọrọ ntanetị nke na-enye gị ohere iji ngwaọrụ anyị na-enweghị ime ka ndị na-ekiri gị mara na ị na-aghọ aghụghọ! Ọ bụ ngwa ọrụ zuru oke iji mee ka ndị Fans gị nwee obi ụtọ, ọ dịkwa mma maka mgbe ịchọrọ ịme egwuregwu ole na ole karịa ka ọ dị na mbụ.
Gini mere iji jiri ichu nta: Ngosipụta Intel karịa ndị ọzọ na-enye ọrụ?
Ihe mere na ị ga-amara ngwá ọrụ a karịa ndị ọzọ dị mfe, dị ka ọ na-enye a otutu ihe mgbe ọ na-abịa na àgwà na aka. O yikarịrị ka ị na-eji ngwaọrụ ndị na-enweghị ihe na-enweghị ọtụtụ atụmatụ iji rụọ ọrụ, mana nke ahụ abụghị nsogbu na GamePron. Ihe ị na-eji igwe dabere na Intel pụtakwara na ị ga-achọ dakọtara, na ekele, ị chọtala ya. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana nkwado ndị ahịa anyị enweghị atụ! HWID Spoofer sokwa na ngwa ọrụ a, yabụ ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere mmachi ọ bụla ị nwetara na GamePron n'oge gara aga!
Enweghị a kwesịrị na-egwuregwu egwuregwu, e nwere ọtụtụ ihe ị pụrụ ime mgbe ọ na-abịa n'ịghọ aghụghọ ule. Ikwesiri ime mgbanwe na ijiji n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ya mere menu egwuregwu anyị ji bụrụ ihe dị mkpa iji tụlee. Ewezuga ya, ị gaghị enwe ike ịme mgbanwe ndị achọrọ iji tinye gị n'ọnọdụ mmeri. Don'tkwesighi ibudata ichu nta: Ngosipụta Intel Hack ma kpee ekpere ka ntọala ntọala ga-arụ ọrụ maka gị! Site n’iji GamePron, ị na-abanye n’ime ụwa nke ihe eji egwu egwu (ma dị irè) maka egwuregwu niile kachasị amasị gị, agbanyeghị oge ị na-aghọ aghụghọ.
Ọ bụ ezie na enwere ụzọ iji meziwanye nkà gị dị ka ihe okike, iji Intel Hunt: Ngosipụta bụ nhọrọ kachasị mfe ịtụle ma a bịa n'imeri ugbu a. Kwaghị asọmpi na ndị egwuregwu ndị ọzọ, dịka ozugbo ịmeere ngwa ọrụ a, egwuregwu ahụ agafeela.
Njikere Na-achị anyị Hunt: Showdown Intel Hack?